Kolontsaina sy fampianarana: ny fototra mihitsy no mila hay | NewsMada
Kolontsaina sy fampianarana: ny fototra mihitsy no mila hay
Tao anatin’ny taona vitsivitsy izay, miroborobo ny fampianarana ny kolontsaina malagasy sasantsasany. Anisan’ireny ny fanorona, ny kabary, ny fomba amam-panao, ny valiha, sns. Amin’ny ankapobeny, midika ho fivelarana ny tahaka izany. Amin’ny lafiny hafa indray, mitaky ezaka sy fikarohana avy amin’ireo mpampianatra ny fivelarana tahaka izao. Tsy ampy mihitsy ny famadibadihana tahirin-kevitra efa teo am-pelantanana an-taona maro.
Firy amin’ireo mampianatra ny kolontsaina malagasy anefa no manana izay finiavana hikaroka izay ? Na, misy ihany ny finiavana hanao izany, saingy tsy laharampahamehana ka aleo aloha ny tonta ihany no avadibadika.
Miteraka fahalainana ho an’ny mpianatra ny tranga tahaka io. Mety hitarika any amin’ny fivelarana poakaty ihany koa anefa satria, ilay nambara tany amin’ny 30 taona lasa ihany no mbola tanisaina aty aoriana. Na izany aza, mila mitandrina fatratra ihany koa amin’ny fanaovana fikarohana mba tsy ho diso ny hampitaina any amin’ny mpianatra !